लगातार घट्दै सुनको मुल्य, आज कति तोकियो ? - सिम्रिक खबर
लगातार घट्दै सुनको मुल्य, आज कति तोकियो ?
काठमाण्डौ, १८ भदौ । स्थानीय बजारमा आज पहेलो धातु सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु ७०० ले कमी आएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज बुधबारको तुलनामा रु ७०० ले कमी आई रु ९६ हजार ५०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारोवार भएको थियो ।